Oku nke Cthulhu: Cosmic Terror nke HP Lovecraft | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Oku nke Cthulhu
John Ortiz | | Ndị edemede, Akụkọ, oké ụjọ
Oku nke Cthulhu -Oku nke Cthulhu, na Bekee - bụ nnukwu ọrụ nke onye edemede America bụ HP Lovecraft. Akụkọ a bipụtara na 1928 malitere ihe a na-akpọ "usoro edemede nke akụkọ ifo Cthulhu", usoro akụkọ na akwụkwọ akụkọ nke egwu ụwa. Ọ bụ akụkọ nke akụkọ gbasara ihe ndị e kere eke oge ochie na-alaghachi ma ọ bụ teta iji mata ụwa.
Enweghi ike ịgbagha agbagha nke ọnụọgụ nke Cthulhu n'etiti ọdịbendị America oge a.: akwụkwọ, egwuregwu bọọlụ, ihe egwuregwu, obere mkpirisi ọdịyo, ihe nkiri, egwuregwu vidio ... Ugbu a, ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu banyere aha ndị na-atụ egwu emeela na egwu, (na abụ ndị otu ama ama n'ụwa dịka Metallica ma ọ bụ Iron Maiden, ọmụmaatụ).
1 Na nchikota oku nke Cthulhu
1.2 Enigma na enyemaka dị ala
1.3 Ihe odide mbụ
1.5 Onye mkpọrọ
1.6 Nightmare obodo
1.7 Na edemede
2.1 Ihe owuwu
2.1.1 Fọdụ n'ime ọrụ ya ndị kacha mara amara
3 Mmetụta Cthulhu na akwụkwọ na nka
3.1 Somefọdụ ndị ode akwụkwọ zoro aka na Cthulhu
3.2 Ndị na-atọ ọchị na egwuregwu
3.3 Seventh Art
3.4.1 Ngwongwo igwe
3.4.2 Psychedelic nkume na Bad Blues
3.4.3 Ndi na-egwu egwu egwu egwu
4 Nkatọ nke "usoro lovecraftian"
Na nchikota nke Oku nke Cthulhu
Oge oyi 1926 - 1927. Frances Wayland Tọsde, nwa amaala ama ama nke Boston, mee ka a mara banyere ọnwụ nwanne nna ya, George G. Angell. Nke ikpeazụ bụ prọfesọ a ma ama nke Asụsụ Semites site na Mahadum Brown. Banyere ọnwụ, e nwere nsụgharị abụọ: nke gọọmentị, n'ihi njide ejiri obi nke mere mgbe onye nkuzi na-arịgo na nso mmiri.
Kama nke ahụ, nsụgharị nke abụọ (site n'aka ụfọdụ ndị akaebe) na-ekwusi ike na onye isi ojii manye prọfesọ ahụ na mkpọda ahụ. N'ịbụ onye naanị ya ga-eketa, Thurson na-anata akwụkwọ nyocha niile na ihe onwe onye n'aka Angell. N’etiti ederede na arịa ụlọ, enwere igbe dị ịtụnanya nwere ihe osise akụkụ anọ ya na ihe odide ndị yiri hieroglyphic.
Oku nke Cthulhu ...
Enigma na enyemaka dị ala
Frances na-atụgharị ihe ọkpụkpụ a dị ka onye na-anọchite anya ihe okike dị egwu nke ejiri okpu eze kpuchie ya ma jiri ụkpụrụ ụlọ na-enye nsogbu. N'otu aka ahụ, n'ime igbe enwere mpempe akwụkwọ akụkọ; otu n'ime ndị ahụ na-ekwu maka "òtù nzuzo nke Cthulhu." Aha abụọ pụtara ugboro ugboro n'akụkụ akụkọ ederede: Henry Anthony Wilcox na John Raymond Legrasse.
Wilcox bụ nwa akwụkwọ eccentric na Rhode Island School of Fine Arts bụ onye gosipụtara Paradaịs Angell ihe osise ahụ (ọ ka dị ọhụrụ) na Machị 1925. Onye ọrụ mmụta ahụ rụrụ ụka na Ihe osise ndị ahụ dị n'ọhụụ ọ hụrụ nke obodo gbara ọchịchịrị nke ajọ monoliths kpuchie na akpaetu. Ọzọkwa, Henry kwuru na ya anụla ozi "Cthulhu Fhtagn."
Ihe odide mbụ
Angell dekọrọ ihe niile o zutere na Wilcox. Ka ọ dịgodị, nwata akwụkwọ ahụ nwere nsogbu ọgbaghara dị iche iche ruo ọtụtụ ụbọchị ya na amnesia nwa oge. Ka o sina dị, prọfesọ ahụ gara n'ihu nyocha; achọpụta site na nyocha na ọhụụ Henry dabara na ọhụụ yiri nke ndị ọzọ na-ede uri na ndị nka.
Ọzọkwa, pịa mpempe akwụkwọ gosipụtara ngosi nke oke ụjọ na igbu onwe n'akụkụ dị iche iche nke ụwa mere n'otu oge na oge ezumike nke Wilcox. N'otu aka ahụ, na sanatoriums ọtụtụ ndị ọrịa nwetara "ịmụ anya arọ nrọ" gosipụtara nnukwu anụ jupụtara n'ụlọ ntu na obodo enigmatic.
Ihe odide ọzọ nke Angell weghachitere afọ iri na asaa na kwuo banyere Legrasse. Nke a bụ onye nyocha ndị uwe ojii tinyere aka na nyocha nke ihe efu dị omimi nke ụmụ nwanyị na ụmụaka na obodo Louisiana. Ọzọkwa, onye nchọpụta ọ dị ka ọ bụ onye hụrụ ndị otu nzuzo Cthulhu (ule nwere ihe akpụrụ akpụ anakọtara n'otu n'ime ememe ndị a).
Na ogbako omumu ihe omumu nke San Luis na 1908, onye nyocha ahụ gakwuuru ndị ọkachamara dị iche iche iji mata ihe oyiyi ahụ. Naanị onye nyocha na ọkà mmụta banyere mmadụ bụ William Webb kwuru na ya hụrụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke Greenland. Ihe omume ndị a mere n'afọ 1860, mgbe Webb zutere ebo Eskimos nke agba aja aja na omume rụrụ arụ.
Ndị otu Legrasse gbara ajụjụ ọnụ "ochie Castro" ahụ mgbe e jidere ya na New Orleans n'oge emume gụnyere àjà mmadụ. Castro na ndị mkpọrọ ndị ọzọ kpọrọ ihe akpụrụ akpụ dị ka "onye isi nchụ aja Cthulhu", An interstellar entity na-eche iteta "mgbe kpakpando nwere ikike."
Mgbe ah ndi eji n’agha tugharia egwu ha —Ihe omimi na nke ndi Eskimos— nwere nkebiokwu: "N'ụlọ ya na R'leyh, ndị nwụrụ anwụ Cthulhu na-echere nrọ". Mgbe ọ gụchara ihe odide nke abụọ, Thurson ghọtara na ọnwụ nwanne nna ya abụghị na mberede. Maka nke a, ọ na - amalite ịtụ egwu maka ndụ nke ya, n'ihi na "ọ marala nke ukwuu."
Egwu, Frances tụbara nchọpụta nzuzo Cthulhu (O zutere Wilcox na Legrasse na mbụ). Ma faịlụ ndekọ n'ụlọ enyi gị nwere ihe akpụrụ akpụ nke yiri onye nyocha ahụ mee ka atụmatụ aghụghọ ha dị iche iche. Akụkọ a na-akọ gbasara ụgbọ mmiri - Emma - nke ejiri otu onye lanarịrịnụ n'oké osimiri, Gustaf Johansen, gbapụtara n'oké osimiri.
N'agbanyeghị n'ụgbọ mmiri ahụ ụjọ juru ịjụ ịkọwa ihe ndị merenụ, Frances choputara ihe mere site na akwukwo Johansen. O doro anya na ụgbọ mmiri ọzọ wakporo Emma ahụ, Aler. Ndị ahụ tara ahụhụ gbagburu n'elu "obodo ozu R'lyeh". N’ebe ahụ, Gustaf na ndị enyi ya hụrụ mgbe a mụrụ Cthulhu.
Gustaf jisiri ike kụọ nnukwu anụ ahụ n’isi mgbe o ji ụgbọ mmiri buga ya. Kemgbe ahụ, ọ dịghị onye ọzọ maara na-ahụ ihe e kere eke. Esisịt ini ke ẹma ẹkenyan̄a enye, ẹma ẹkụt ke awat nsụn̄ikan̄ oro akpa. N'ihi ya, Thurson kwenyere na ndị na-eso Cthulhu ga-anwa igbu ya n'ihi ihe niile ọ maara.
N'ikpeazụ, Frances gbara arụkwaghịm na-anabata ịdị adị nke ụlọ ọrụ sitere na ụwa ndị ọzọ ye mme mbụme emi ẹban̄ade ifiọk owo. Tupu ị lawa, Thursday kwuru na obodo ahụ na anụ ọhịa nke Cthulhu ga-adalarịrị, ma ọ bụghị, "Wouldwa ga-eti mkpu na ụjọ". Ntụgharị uche ikpeazụ nke protagonist na-agụ ihe ndị a:
Onye maara njedebe? Ihe bilie ugbu a nwere ike imi na ihe meworo nwere ike ịpụta. Ihe arụ ahụ na-eche na nrọ n'ime omimi nke oke osimiri na obodo obi abụọ na-enyo enyo na-ese n'elu mmiri. Thebọchị ahụ ga-abịa, mana agaghị m eche echiche banyere ya. Ọ bụrụ na anaghị m alanarị ihe odide a, ana m arịọ ndị na-eme m ihe na akọ ha karịrị akarị nke nkwuwa okwu ha ma gbochie ya ịda n'okpuru anya ndị ọzọ ”.
Howard Phillips Lovecraft mụrụ na August 20, 1890, na Providence, Rhode Island, United States. O tolitere na ezinụlọ bourgeois nwere ọchịchọ nke klaasị (ajọ mbunobi doro anya, ọkachasị na nne ya na-eche nche). Na otu, onye edemede dere echiche nkwalite ugwu ma bia gosiputa ikpa oke ya n'oge di iche-iche (pụtara ìhè n'ihe odide ya).
Ọ bụ ezie na Lovecraft nọrọ oge ndụ ya niile n'obodo ya, ọ biri na New York n'etiti 1924 na 1927.. Na Big Apple ọ lụrụ onye ahịa na onye na-amu amu onye edemede Sonia Greene. Mana di na nwunye ahụ kewara mgbe afọ abụọ gachara na onye edemede ahụ laghachiri Providence. N'ebe ahụ ka ọ nwụrụ na Machị 15, 1937 n'ihi ọrịa kansa na eriri afọ.
N'etiti 1898 na 1935, Lovecraft mechara ihe karịrị akwụkwọ 60 n'etiti obere akụkọ, akụkọ na akwụkwọ akụkọ. Otú ọ dị, ọ bụghị onye a ma ama na ndụ. N'ezie, ọ bụ site na 1960 ruo mgbe onye edemede America malitere ịmalite ịbụ onye okike nke akụkọ egwu.
Fọdụ n'ime ọrụ ya ndị kacha mara amara
Onyunyo oge ozo
N’ugwu ara ara
Okwu nke Charles Dexter Ward
N'akụkụ nke ọzọ nke mgbochi nrọ
Nchọgharị na nrọ nke Kadath amaghị
Onyunyo dị na Innsmouth.
Mmetụta Cthulhu na akwụkwọ na nka
Ruo ugbu a, a sụgharịrị ọrụ Lovecraft n'ihe karịrị asụsụ iri abụọ na ise na aha ya bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na akụkọ ifo nke ụwa. Ihe bụ ihe ọzọ, akụkọ ifo Cthulhu metụtara ọtụtụ ndị na-eso ụzọ, ndị na-ahụ maka "ịchekwa" ihe nketa nke Lovecraft. Themfọdụ n’ime ha bụ August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Fritz Leiber, na Robert Bloch.
Somefọdụ ndị ode akwụkwọ zoro aka na Cthulhu
Ọ bụ Ray Bradbury
Joyce carol kwuru
Ndị na-atọ ọchị na egwuregwu
Phillip Druillet, Josep María Beà na Allan Moore (mmadụ atọ ahụ mere mgbanwe mbụ na-adabere na anụ ọhịa Lovecraftian)
Dennis O'Neil, onye na-ese foto nke Batman (Obodo Arkham, dịka ọmụmaatụ, mepụtara Lovecraft).
Obí na-anyụ (1963), nke Roger Corman dere
Ihe site na ụwa ọzọ (1951), nke Howard Hawks dere
Onye ọbịa: onye njem nke asatọ (1979), nke Ridley Scott dere
The ihe (1982), nke John Carpenter dere
Re-Animator (1985), nke Stuart Gordon dere
Ndị agha nke ọchịchịrị (1992), nke Sam Raimi dere
Agba nke Oghere (2019), nke Richard Stanley dere.
Mmụọ na-adịghị mma
Iron Nwata nwaanyị
Psychedelic nkume na Bad Blues
Ndi na-egwu egwu egwu egwu
Chadi dị iri
Naanị ya n'ebe ahụ Dark, Mkpọrọ nke Ice y Onyunyo nke Cometsite Infogames.
Oku nke Cthulhu: Ọchịchịrị Darkwasite n'aka Bethesda Softworks
Oku nke Cthulhu: Egwuregwu Video Official (egwuregwu na-egwuri egwu na ntanetị) site na Cyanide Studio.
Nkatọ nke "usoro lovecraftian"
Ọtụtụ ndị ọkà mmụta gburugburu ụwa na-ahụta akụkọ ifo nke Cthulhu dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ edemede edemede n'onwe ya. O sina dị, Lovecraft abụrụkwala nkatọ a na-akatọ maka iji ụdị ihe eji eme ihe —Dị ka ndị edemede dịka Jorge Luis Borges ma ọ bụ Julio Coltázar, dịka ọmụmaatụ - dị mfe na prediktebul.
N'agbanyeghị nke a, ụfọdụ ndị gụrụ akwụkwọ na-atụle ya Akwụkwọ aja (1975) site n'aka Borges dị ka ụtụ maka Lovecraft. Mana olu ndị ọzọ kwenyere na ezi ebumnuche nke ndị ọgụgụ isi Argentine bụ igosipụta ịdị njọ nke usoro Lovecraftian. Maka akụkụ ya, na edemede ya Ihe edeturu na Gothic na Río de la Plata (1975), Coltázar zoro aka na onye edemede Onye America dị ka ndị a:
“Usoro Lovecraft bu isi. Tupu igosipụta ihe dị egwu ma ọ bụ ihe dị egwu, wee jiri nwayọọ nwayọọ bulie ákwà mgbochi na usoro ugboro ugboro na nke egwu, ahịhịa metaphysical, apịtị na-ewu ewu, akụkọ ifo ọgba na ihe e kere eke nwere ọtụtụ ụkwụ sitere na ụwa diabolical ”...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ » Oku nke Cthulhu
Giacomo Leopardi. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Nhọrọ nke poems
Dị ka mmiri maka Chocolate